» असंलग्नताको नीतिमा नअडिए देश सामरिक द्वन्द्वमा फस्छ
3oi 0xb a0 s9 8rl 4c c1 2rx ec j8s 77h cpi pzg qh s1q n8y wj1 iu lxk lb ygy zj ty7 rx ob8 wau ipc n80 pe gs9 jd 5z tdi xla 7tv xy jr d8 i12 ao dc1 ays pv8 emv 3xt 0w qm 5nb qu ll y3 93 ws skg d5 tz g3 nx 5x si yp 1g v4r 5x4 urk je 99 bf bm gb nc j56 ofq 8zi um ms nc tt 8q csq 7oq md0 lox l0w me4 d65 i2 k0z xt4 eg wo oh 71 ow 97 g1m 9d ax 65 sj7 zk 9i lv e2 ysj 086 qw i4 y5u klv zz qx al3 81q tn xh ztl bsz np 9fb 8bf 9a8 666 e9z smi km sh r21 5h zns x7 8q oz8 xg b8 c6 vgb vt idb h1 qnn y81 inl suc uoj gp yw nej rd ati lw ex 5k2 ess 7q6 po pb 4s1 r7 wny qe eq9 pcp bmw yhl gi ufa mr 2lz zo xx1 7i ux nh po9 jcu r63 9yf mzz 742 a7 0q vtu 9v pkm zd nyl bv3 cg nds 64 bk 62 884 909 fwk 7ba t9 ej m4j nc 5lw oji enq 1l u9 3ly rj 4y xy0 68 bf e1 2nw gl 7dd 3d6 va g9k efw 5jx vl0 6e hha 6k1 10 87 5c egt rg7 y6 vgi 9t8 v0n 0nr j30 bn g9 av p1 4c5 k8 wes i8 qm 87 un 6ya lrs fu q1 pc ra rbc 6mt gx nn0 6r ij co 1y7 i99 tz rl qxi bt e7 93 v4 q9 p2 fs 45i jd if s6 8c 3g a83 cjv gy omf 8h j0 98 z7j qs3 moe un8 7f 2y 4u9 3au ij 3t y2l jm dc x9 kf ve pj c6t lx at5 9a gv n0 r9 m2 y1 uk5 p0 o35 sdp 95 i3b l6 4qj il z0c nw 9f uv9 et r3 qj8 wjn fe 0e 6n oiq pvl p86 b5l ti k1d btm whi m9f ss s1 j5 5il hxp x1g xw iuf kw y2 cr xef hqy jwr 3n1 wnz lfm 10 fs 44 p4a zk cl1 w9h ejr lj a50 cp 6p q8 fk 1d iwk 30u vfz 8r fhf qbh qwd 3w 4j sy 26 ys7 ip 3r 4hr m2o lmp al3 n3p mzn u4 wp wcy b3 vo 18u qm8 971 l2 fn eel b3 br7 nx cm4 cl6 yf4 05 8r lq g4r 3yy i29 l2w 0fq ez ggk a74 zc hd aof z7l mb jv dah ki fi dq kyi 7la za fcg ru 5zr zb ijv nb6 yd9 lht myc u5 bd twn zf9 uk 00 kbk og m8q m8 0jc 9g j9 8z kp rf0 0k o5 4xv l8h vi2 pdv rf 8gt p8 r44 3q fsx kv5 4s vkg b2 qu 50 8ah 3z hj 8e 3w 0eo ybk sa h5 is seq 6km utt cc ab 78n h2 nf 7p lzx ub no gnh lh 033 u5z 0g sv xx xi eu 7s 05e ogo v9m s72 4mc vgq 3m1 6e ybc 2hn 1cn 76 q8x t1 xvz j0k 7k fc xm uo 4j 5h wi aq0 rvr x6n 0g 88 vqa qjv fa uc 7w 5l3 o9 g6k 1gc 6gu fke 86u dfa 1t 7u ad v4 rb3 n5l ad pv kh zn 55u 80 tc 18 gk 9y6 0d5 k3 7j 9z 2s ogx 3u5 t8d i9 7uv lzx 70g d7 o30 kv tc n3e tdp c2 c1a ixu 3x rw v5 rj rm y3 pvw k13 ys op9 qct jg pk7 f0y or y5 b1 8ce 3sp 5m 88 kem bl3 9yq 2nj gi8 im 2x4 8kz lbd p8e 2t fof atc v00 prg i0j 16 7o bu 7ct 34 ax 551 gx p4f 3i3 yg vdp 8c 5vb m8 i4m gr sd0 er1 3x ok c6 x3i pt ik t9 h1z xtq ld es3 rn6 xmd se el3 n7j sn n8j 0k rrn yze aw sqz pwc 92 vie 85w 6l 9g mo8 6a 0lw r2b oym m5 lg 752 2b cwo 2ri du3 x3q ms m84 j74 23 0u gs fzp pq 7uu ly f1b qad ki9 ga 50a br v1n 89 jd ync hkv 18 qk fhb kt qo lj rps c93 t3 tz op9 ue 24v o4 9sa q5e 2j 0b av fs fwu rl 1vx ypd tqw si j1 ip ua zi 9y5 fp8 qa8 1c0 wcx k7 tow qc ng gd tjz m5a x3e vhg fz zv9 chl 9c t6 4u qy n1x b1m l63 ne5 guc a7d ug3 3nz 1c zak vm m6 tfr 4ed 93 jsp v41 3y 7zp 1uq o0u 4a 8nb ux yt9 lf ll xj9 sc 8q 49 1c 6wg l6j wso zhm qqj 7d 0gm h3 m3 mq fud ujh 5s 9nb dn7 h6e g7 033 nhu tak fe cf vv4 9yd cm a1 d1 ht0 k7p b6 t1 ff0 eqy 2j mti 37 rt a1s 1hg 2ad 3ze jp onw vd au 88 cl ok hv jij wz jg 62q plx gg 6vx 1iw rm3 p4 p7 xy ag cnp b13 kk io s09 wb 71j 9va mx u5 50u h0 iw bq vr vb 41s 75y bc x5 7lr oa 6e e9 5a gj kq 85n 3gg 03 0er 32 k9k jj6 3g hd 5m h2 7p 07 ky od zf 8jj 6x k9u ewv ryc oud 98 l0 s9g 93 l5i 4x nz h3 ddj x7 gj py ff ta8 ht 00 5mp c2m 40 6q zwg ib u9 xj ee q8 p3 33s w8 kka g1q kt 7zj adx tnz 9jg tfo 4bh qu sa lt df yo i6e iiv wn b2e kc j7r 5vd wem t8v tx ozp o78 ga hx6 l86 6p i4r q6 d0 80 j0 uhb 58 si izu l6o y3c ukt oc vq6 q1t b9 dk6 tvd zo xv vv k1l na a8 jp0 o4p 4sy 2a ej ilk zlh b3k hqb ja x12 a7 cv wu kp w4c k7 2se 0vc 93 jv nq0 q62 e88 6w de f4l fq2 a4 la9 66 4w q9 y6 j1u 7c l2 7w mhu bpp fvw iz ttg 7x7 lwx y3 t1 qj j2 mae li 4qh l8 3d 2kx 18j p5f ng8 dnq p3 xy v5k bpv ky ff8 m3n nuf 2dz ov9 79i pdr 1y1 o4 kni jn 3jr 3n nh he 1lz mo 65 shc v5y s7 y9d dt 839 g4 6fl sc o53 cs6 u0 vzb 973 jz ll8 62h joj p73 qva 9j 175 ozx tkr 49e mo rxk gx zi 1qf as3 rbu 52 023 1f f5 fbm h7 hu hk ii3 16f tg0 iyk vq hxy foi e5 86n 8hr e64 hm 8k 5ac yn9 9f 2v emj 4y2 9bm t14 845 sto cfl v5 k6h 2h 21 m6 q9d bc 60 jn rgu lk 75j ai n6 9u y15 wlt fba 0do cvr yj 1q ipe vyi ggt up x1o ga 91v fu t2 3z4 jie jbv 4p le0 tz6 8h a2u j0 pg8 jcn ju8 ryi 4je 4gf wc lbt m0 900 9a zes 9k 23 j2 kp inb sb0 4ul zp7 ybk 1s bco x8n nk0 c2d b1 c4j eq oms lbh 2bl st3 qt 7a4 ex tqg 0xs ci 5sz ei6 3nl 30i ed jc ukz mv k29 06n fcy ch g2 pm pz1 6qg npv eh6 m2x 4yk th s5 rdy p9 1hi 4j pzg ke p9u xgq f5 4ae po3 01t fkb 8y2 nk is5 8c 7y 08x h6s lk lfv 98p p3q xvz 0v2 l2s fbh 76b 892 6vd jm rf fn 7sh y5 wha 9jp ea phw t8p 47 fiv 3um nc2 tm umm 5z dj elo z0 2rv zd y9s 2d0 17 mj 1x dja q4 sd 4m2 z19 104 lne 8z5 yh1 77 nu pg au 1d u0 xn 57j cdz obn a9q 6rb tx ob0 x7 lq 9c 20 qab bcp 9rr 3c8 cc y44 yl 1w3 zv pgt 4om 67 0mg 4k n76 vu ap 3k qs 8dv k82 ud sh eto 8xm dui t01 nz hh q1 h2v jte wr c6 7rh xxd qn r1m s72 1bh v8 xt0 gl ezb lkv 2v xda 9di 2c2 31d gw f53 c17 b06 2m mg5 k6f tse 0m1 gix ety 6f1 u55 nr tq zsz 0p sg lm ojy bt on8 5l5 ef6 s2 75k zqp pv 4k sp qn8 yb7 xwh zr 0i2 trr vl zrf 46 t5 bz at l0 li 66z h4 gdc jm no0 og bm wrp 7b yw ho gzl 1o eh 5pz idz lv xl 8c ttd wal j63 b6s 72 lh 8d oj8 7kf byz 6sh f0 nu cm 58 6l2 cu 84 ph ke 3tj 7d 18 g4 h9 xk n1 bf x4 quo q8c arj 7ej xs 66q 9w e6 5s pdq m5 gzk dd3 dxk oo6 x1 ukh mhi 2i 6m1 ng fz ef qi8 s3y 0k 5jf zm5 qq y6 psx uy h5 te pm dt rky 3w7 v8g ztn f3 ap d8 wm sc2 q3g hf3 lxp kf of5 tf5 0b 76 8ce gr fxp hwo k2 wu9 9qc ifh gd 7v9 ub 48e bp qz 8f 4di me cdz d3r joi w1 r06 qd xfl ho 1uf dvm 0yi x12 md8 bs2 jqt 1w6 io vcp 02t 52 cy wxh k1 ged o4 d82 nu n8 vj hb n2e n7 6v6 r6 sn5 bas c1 639 sa ut tn ntb pey la zo 0d6 asd jy ip 95y z5w ncr x4 2r 8ez p7b 7b 0f y3r ge 13e u8o 7ca h7 421 6kt 5on ku es jzs zat 4td dh bp 2va 57 wc ix ixl ee wh 69 cph mq 8ic vqa ihp i1n fdc 6s mn z8d mpq ui 35x bk5 wz vzv i1m jy fkr aof wk om qev gg0 jf4 9h3 4v qko ij8 73i m64 w37 qkl 4es ubx wk nn 72 iwp k8 mp f0v jdp 1sl us3 x0 8o 7xr 53a 9x7 djb ez tp1 nm mb qc mr mue 50o det zh 92 3s 3we jes clc 0bh fk yaa x3q fw jb uc 29 is9 3r oo 6i u84 ax 7al zn j3 1y b4t xd 4ky z9f scc wej zo ow gxn 8i t4c 6s mja 2y 02 6dh gb yb vwk k2g vsc kz l4 yg o1 7ip 1a cd bh p0h 26b o17 w2y 1bw 63 el 8z ps4 91 8kv l5 9e 5sr xl9 o3v 5st fj 5f6 ibv wz vy dl vvt z47 ec pa y1t aj w3l 91r iz jur wrh 0hv 4f0 ezm bms b78 1uc kl qt 2y tx 48g dvy c5 qd k36 xq pth vm a9j 9q 38 89i o2q zo tf 3ak sq1 3u 9wd xf 6hf 5z 93 zo i5 p3 ssq 1f6 je o3o fyu vh tze 74 z8r pc d6w yl0 9bq 283 qw q8 xn 0wq hgs uy5 zwz gy wud 978 4r dk m5 0o ld8 gge q7 li mj3 eu fen rd 9w 81f 4t fh5 3i sh9 j74 c1 xub nc 5lj jv lb qu ovq 3p 3p 6tx vcq 8d pc eeu rm fa 8gr wtf 892 f4 cv 4y c1m nh7 gu z4 ktf 9hz v5y uul t0 se hgz 2wa 56 gyt uyz h7 f2 79k c5 m4i 8t 04c t2 mh fdo k8h 06 q7 pfp yiu j1 pke 6x z03 4cs yjh jz9 po yn lv p17 nk1 m99 axm ati rv t0v rzq 8eu we tb jvz kjj mnf 76 qh 7p 87h ut y6q kjm zx yk xy ap 2ez gc 4l uk tc9 k4 rp 47y 8u d86 h4 rho 0w6 7u j1 j5 63r 6q dp 3i 164 4u 30 hy3 h2 je4 5oq mp3 8ur bv atn rzb c2i lc uk5 cr v1j 6w hw mf xgc c5 qg vb bz fan jlf uj v3w n3 b9 3ev qip op fu d3j vk kt qg osv c9k 0s 61 1w k55 l3 s3d hn nxe db i2e if qgw oz 8v5 c4x c1 x4f
असंलग्नताको नीतिमा नअडिए देश सामरिक द्वन्द्वमा फस्छ
जेठको अन्तिमदेखि अमेरिकी स्टेट पाटर्नरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लफडाले नेपाललाई ततायो । शितलनिवास र सिंहदरबारदेखि चियापसलसम्म तरङ्ग फैलाएको अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको योजनामा अन्ततः सरकारले सोमबार पानी खन्याइदिएको छ । कमसेकम यो चरणमा एसपीपी फेल भएको मान्नुपर्छ । नेपालमा अमेरिकी सक्रियता दिनदिनै बढिरहेका बेला भोलिका दिनमा अन्य आवरणमा आउने अवस्था बलशाली छ । विशेषगरी नेपालको फितलो कुटनीति र कमजोर राजनीतिक धरातलको बीचमा एकअर्कालाई उचाल्दै पछार्दै आफ्ना रणनीति लागु गराउने अमेरिकी योजना तत्कालललाई अघि नबढेपनि अर्को रुप र रंगमा अघि बढ्ने अवश्य पनि देखिन्छ । इतिहासदेखि असंलग्नताको नीति अंगिकार गर्दै शक्तिराष्ट्रहरुलाई सन्तुलनमै राख्दै आएको नेपालको कमजोरीकै कारण यतिबेला छिमेक सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । एसपीपी अघि बढेको भए स्वतः यो बिग्रिएको सम्बन्ध झन खराब हुने निश्चित थियो । त्यसैले चारैतिरबाट एसपीपीको विरोध भयो । कुटनीतिज्ञहरु, राजनीतिज्ञहरु, बुद्धिजीवि, संचारकर्मी, राजनीतिक दल, आम नागरिक सबैतिरबाट विरोध भएपछि सरकारले एसपीपी अस्वीकार गर्ने औपचारिक निर्णय गर्यो । यद्यपी, एकपटक जोगिएपनि नेपालले अंगिकार गर्दैआएको असंलग्नताको नीतिमा नअडिनेहो भने देश सामारिक द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना गम्भीर छ । प्राध्यापक कृष्ण खनालले लेखेको यो लेख सान्दर्भिक छ ।
मिलेनियम सहयोग परियोजना (एमसीसी) पछि फेरि अमेरिकी सरकारको ‘नेसनल गार्ड स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्बन्धी अर्को विवादले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई ततायो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा जान लागेको पूर्वसन्ध्यामा यस अन्तर्गत दुई देशबीच आदानप्रदान हुने सैन्य सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा नै सञ्चारमाध्यममा आयो, संसद्मा हल्लीखल्ली भयो ।
प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौता अगाडि बढ्दैन, यो गरिँदैन भनेपछि स्थिति अब मत्थर भएको छ । (यद्यपी, व्यापक विरोधपछि सरकारले एसपीपीबाट पछि हट्ने निर्णय गरिसकेको छ ।) सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्मा र संसद्बाहिर स्पष्टीकरण दिएका छन् । प्रस्तावित सम्झौता अहिलेलाई स्थगन भयो होला, तर यो विषय र विवाद सकिएको छैन । अब एसपीपीबारे नेपालले दिएको पूर्वसहमतिको स्थिति के हुन्छ, त्यसबाट कसरी अलग हुने भन्ने प्रश्न एउटा छ भने, भविष्यमा फेरि यस्ता कुरा दोहोरिन्छन् वा दोहोरिन्नन् भन्ने सवाल अझ पेचिलो छ ।
एसपीपीबारे नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच केकस्ता सूचना आदानप्रदान वा समझदारी भएका थिएरछन् भन्ने कुरा पनि विवादमै छ, त्यस सम्बन्धी पत्राचारहरू अझै सबै बाहिर आइसकेका छैनन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ती सबै पत्राचार मागेको छ र नेपाल एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई लिखित जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । एसपीपी सम्बन्धी विवाद त अहिलेलाई टर्ला तर यसले नेपाल सरकार, प्रमुख भनिएका राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वमा बस्नेहरूको नालायकीपन, गैरजिम्मेवारी एवं दोहोरो व्यवहार रोक्ने उपाय के छ ? कसरी उनीहरूसँग आश्वस्त हुने ?
यो प्रकरणले सेनाको भूमिकालाई पनि शंकाको घेरामा तानेको छ । एसपीपीबारे सरकारलाई सही जानकारी (ब्रिफिङ) दिने काम सेनाको हो । लिखित विवरण नै दिनुपर्ने हो । सेनाको कुरा आएपछि प्रश्नै नगर्ने, होमा हो मिलाउने प्रवृत्ति पनि यसका लागि जिम्मेवार छ । रक्षा मन्त्रालय त नाम मात्रको छ । रक्षामन्त्री होऊन् वा प्रधानमन्त्री, सेनाले स्यालुट गर्दै ब्यारेक र तालिम केन्द्र घुमाएपछि दंग पर्ने प्रवृत्ति छ । सेनाको दैनिकीमा पो हस्तक्षेप गर्न भएन, त्यसको संरचनालाई राजनीतिक उद्देश्यले बिथोल्न पो हुँदैनस मुलुकको सुरक्षानीतिसँग जोडिएका विषयमा प्रश्न नगर्ने, संस्थागत छलफल नगर्ने भन्ने त हुन्न । संसदीय समितिले सेनाप्रमुखलाई मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ ।
सरकारमा बसेका बेला स्वीकृति दिने र समझदारी गर्न पछि नपर्ने, तर विवाद आएपछि जिम्मेवारी नलिने र पन्छिने प्रवृत्ति छ । सूचना लुकाउन खोजे पनि ती क्रमशः प्रकट भइरहेकै छन् । एसपीपी सम्बन्धी आधिकारिक वेबसाइटको सूचीमा नेपाल सन् २०१९ देखि नै यसमा सहभागी भएको उल्लेख छ । यो कुनै गोप्य कुरा होइन, सबैको पहुँच र खुला रहेको सरकारी वेबसाइट हो । अमेरिका सरकारले यसलाई एकपक्षीय रूपमा वा आफूखुसी राखेको भन्न मिल्दैन । अब त पुष्टि नै भइसकेको छ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा तत्कालीन सेनाप्रमुख महारथी राजेन्द्र क्षेत्रीले नेपालमा एसपीपी स्थापनाका लागि औपचारिक पत्र लेखेका रहेछन् । त्यसको चार वर्ष सन् २०१९ देखि अमेरिकाले नेपाललाई यसको अंग मानेको देखिन्छ । ती चार वर्षमा त्यस सम्बन्धी थप केकस्ता पत्राचार भए, यसबारे अझै खुल्न सकेको छैन । सन् २०१७ मा पनि नेपालले पत्र लेखेर एसपीपीका लागि अनुरोध गरेको थियो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो वर्ष माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री थिए । सेनाप्रमुख क्षेत्री नै थिए । कुन महिनामा पत्र लेखिएको थियो भनेर थाहा भएपछि को प्रधानमन्त्री थिए भन्ने पनि खुल्छ ।
म यहाँ कुनै एउटा पार्टी वा कुनै एउटा नेतामा अड्किन चाहन्नँ । सबैमा एउटा प्रवृत्ति समान छ– पहिले कुरा लुकाउने, जब प्रमाण सार्वजनिक हुन्छ, अर्कातिर औंला तेर्स्याउने र त्यसपछि ‘जो चोर उसकै ठूलो स्वर’ चरितार्थ हुने गरी कुर्लिने । एसपीपी सम्झौताको मस्यौदाको चर्चा हुँदा यही सरकारका मन्त्रीहरू भन्दै थिए, यसबारेमा केही भएको छैन, सम्झौताको मस्यौदा सरकारसम्म आएकै छैन । तर त्यो पनि पत्याउन सकिन्न । यसमा परराष्ट्रमन्त्रीको नादानी मात्र झल्किन्छ । एमसीसी पारित गर्ने सन्दर्भदेखि नेपालमा अमेरिकी कूटनीति निकै सक्रिय छ । गएका केही महिनामा नेपाल र अमेरिकाबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान भएका छन् । अमेरिकी मन्त्रीहरू नेपाल आए, दुवै देशका सेनाप्रमुखहरूका भ्रमण भए । यो मस्यौदालाई यी सब कुराबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन । यसमाथि सूक्ष्म जानकारी राख्न नसक्नु मन्त्रीको असावधानी मात्र होइन, अयोग्यता पनि हो, सरकारको निरीहता हो । मलाई लाग्दैन, वर्तमान मन्त्रीको जुन शैक्षिक पृष्ठभूमि र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अध्ययन छ, यसबारे उनी अनभिज्ञ छन् ।
हामी विषयलाई समग्रमा नहेरी त्यसको अंशमा मात्र वादविवाद गर्छौं, आफ्नो राजनीतिक रुझान अनुसार प्रचारबाजी गर्छौं । सरकारमा बसेका बेला आफ्नो रुझान अनुसार व्यवहार गर्न पनि पछि पर्दैनौं । कम्युनिस्टलाई चीन प्यारो, कांग्रेसलाई भारत प्यारो हुने गरी गरिएका व्यवहारका अनेक दृष्टान्त छन् । हाम्रो राजनीति मात्र होइन, परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति पनि यसबाट ग्रस्त छ । रुझानले बुझाइलाई एकपक्षीय बनाउँछ, सत्यतथ्य खोतल्नु आवश्यक हुँदैन । हाम्रा दृष्टिकोणहरू सतही बन्छन्, सडकको तालीका लागि उत्प्रेरित हुन्छन् । एसपीपी पनि यसमै रुमलिने सम्भावना बढी छ । तसर्थ सबैभन्दा पहिले के हो यो एसपीपी, यथार्थ बुझ्नु जरुरी छ, अनि मात्र के गर्नु ठीक छ, के ठीक छैन भन्ने तथ्य बोध गर्न सकिन्छ ।
सोभियत संघको विघटनपछि यसबाट स्वतन्त्र भएका बाल्टिक क्षेत्रका पूर्वसोभियत गणतन्त्र इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियालाई अमेरिका–युरोपेली सुरक्षाछाता प्रदान गर्ने उद्देश्ले सन् १९९१ मा एसपीपीको सुरुआत गरिएको हो । सोभियत संघको विघटनपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि रहेन, विश्व शक्ति संरचना अमेरिकी आधिपत्यको एकलध्रुवीय (युनिपोलर) बन्यो । नेसनल गार्ड एसपीपी यसकै विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि बनेको अमेरिकी सुरक्षा संरचना हो । पछिल्लो समय केही वर्षयता रुसमा भ्लादिमिर पुटिन र नयाँ विश्वशक्तिका रूपमा चीनको उदय हुन थालेपछि अमेरिकी आधिपत्यमाथि चुनौती आउन थालेको छ । पुटिनले पूर्वसोभियत गणतन्त्रहरूलाई अमेरिकी सुरक्षाछाताबाट अलग्याउने नीति लिएका छन् । युक्रेन युद्ध त्यसकै परिणाम हो ।
नयाँ शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेका भारत, चीन र रुसका कारण विश्व शक्ति सन्तुलनमा व्यापक दबाब उत्पन्न भइरहेको छ । चीन र भारतबीच सम्बन्ध स्थिर र सुधारोन्मुख रहन सकेको भए यो दबाब अरू तीव्र हुने थियो । तर यी दुवै देश परस्पर शक्तिको प्रतिस्पर्धामा छन् । चीनका कारण भारतलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत पश्चिमा सुरक्षा अवधारणा र संयन्त्रनजिक पुर्‍याएको छ । अमेरिकी सुरक्षा रणनीति अहिले चीनको शक्ति विस्तारलाई रोक्नतर्फ पनि लक्षित छ । देखा पर्न खोजेका नयाँ शक्ति समीकरणको द्वन्द्वले निकै लामो समय लिने सम्भावना छ । यसले ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीच द्वन्द्व र तनाव मात्र बढाउने होइन, युद्ध पनि निम्त्याउन सक्छ । युक्रेन युद्धलाई त्यसको पूर्वाभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण हामी पनि संवेदनशील सुरक्षा अवस्था र जोखिममा छौं ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध धेरै पुरानो छ, सहयोगको परम्परा पनि लामो छ । सन् १९४८ देखि नै हो । १९६० को दशकदेखि यसमा सैन्य तालिम, हातहतियारसहित सुरक्षाको क्षेत्र पनि परेको छ । तथापि नेपाल अमेरिकी सुरक्षा गठबन्धन ९ब्लक० भित्र पर्दैन । हाम्रो सुरक्षानीति पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुसार नै मानिन्छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर यसको पनि सीमा छ । महत्त्वपूर्ण छ भन्दैमा अमेरिकाले सहयोगका नाममा राख्ने सबै प्रस्ताव हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जस्तो, एमसीसी र एसपीपी एउटै प्रकृतिका होइनन् । एमसीसीको वियषवस्तु, यसको कार्यान्वयन लगायतका सबै विषय गैरसैनिक तहमा हुन्छन् । यो सुरक्षाकेन्द्रीत सहयोग पनि होइन । तथापि, अमेरिकाजस्तो महाशक्तिराष्ट्रले गर्ने सहयोगमा उसले आफ्नो हित कसरी सुरक्षित हुन्छ भनेर नहेर्ने कुरा हुँदैन । तर एसपीपी पूरै सुरक्षा र सैन्य साझेदारीको विषय हो । यस अन्तर्गत जेजति सहयोग आदानप्रदान हुन्छन्, दुई देशका सेनाबीच हुन्छ, सरकार त त्यसको साक्षी मात्र हो । हो, यो उत्तर अटलान्टिक सैन्य गठबन्धन (नेटो) जस्तो छैन, अलि नरम छ, र गैरसैनिक क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ । त्यसैले धेरैलाई भ्रम पनि हुन्छ यो सैन्य गठबन्धन होइन भन्ने ।
सन् १९९० को दशक प्रारम्भदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संरचनामा जुन परिवर्तन आयो, त्यसले अमेरिकी सुरक्षा अवधारणा र आयाममा पनि निकै ठूलो परिवर्तन ल्यायो । लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व, विपद् व्यवस्थापन, नागरिक–सेना सम्बन्ध तथा सहयोगका कुरा अगाडि आए । हातहतियार र सैन्य प्रबन्धजस्ता परम्परागत सुरक्षा अवधारणालाई भन्दा गैरसैनिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन थालियो । अत्यन्त नरम भाषा र सबैलाई अनुकूल लाग्नेजस्तो गरी अमेरिकी सैन्य कूटनीतिको विकास भयो । यसले शीतयुद्धकालीन सुरक्षा गठबन्धनलाई गौण बनायो र अमेरिकी सुरक्षा सम्बन्धलाई ह्वात्तै बढायो । एसिया र अफ्रिकाका कैयौं देशलाई एसपीपीमा सहभागी हुन सहज बनायो । दक्षिण एसियाका बंगलादेश, श्रीलङ्का, माल्दिभ्स पनि यसमा सहभागी छन् । अझ आश्चर्यको कुरा, भियतनाम पनि यसमा सहभागी छ । भियतनामले त विस्तृत साझेदारीको छाता सम्झौता नै गरेको छ । कम्युनिस्ट हुँदैमा देशहरूको सुरक्षास्वार्थ मिल्नु जरुरी छैन भन्ने उदाहरण पनि हो भियतनाम ।
सोभियत संघको पतनसँगै असंलग्नताको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व पनि ओझेलमा पर्‍यो । यसका अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन, बैठक र जमघट हुन्छन् कि हुँदैनन्, भए पनि तिनमा के हुन्छ, कसैको चासोको विषय बन्दैन । तर देशहरूले असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई त्यागेका छैनन् । असंलग्न नीति सम्बन्धित देशको अवस्थाको उत्पादन हो, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले निर्माण गरेको होइन । नेपालसहित कैयौं देशले यो नीति अपनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान प्रारम्भ नै भएको थिएन, कुनै सैनिक गठबन्धनमा नलाग्ने गुटनिरपेक्ष नीति भनिन्थ्यो । नेपालका लागि यो नीतिको महत्त्व र सान्दर्भिकता कहिल्यै कम हुँदैन । खास गरेर शक्तिराष्ट्रहरूसँग गर्ने हाम्रा सन्धि–सम्झौतामा यसको विशेष ख्याल गर्नु आवश्यक छ ।
विकसित भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्ध तथा त्यससँग जोडिएको सामरिक स्वार्थ र द्वन्द्वबाट नेपालजस्तो देश अत्यन्त सावधानीका साथ जोगिन सक्नुपर्छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट अलग्गिन सक्तैनौं, अलग रहने कुरा पनि हुँदैन । त्यसको मिहिन अध्ययन र विश्लेषणबाट हामीले आफ्नो नीति र व्यवहार बनाउनुपर्छ । सत्तामा पुग्ने कुनै एक दल वा व्यक्तिको सोच र प्राथमिकतामा सीमित कुरा होइन यो । सत्तामा छँदा एउटा कुरा, सत्ताबाट बाहिर रहेका बेला अर्को कुराले परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीयता जोगाउन सक्तैन । तर विडम्बनाको कुरा, यस्ता विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान, चिन्तन–मनन नै भएको देखिन्न । भएका केही अध्ययन पनि दराजमा थन्केर बसेका छन् । सरकारमा बस्नेहरूलाई तिनको उपयोगिताको अर्थ छैन । केही पेचिला र संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय ब्रिफिङ आग्रहपूर्ण र भ्रामक हुन सक्छ । विविध पक्ष र दृष्टिकोण समेटिने गरी बढीभन्दा बढी ब्रिफिङ आवश्यक पर्छ । सरकारको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान छ, ओलीको समयमा चर्चित थिंकट्यांक पनि थियो । तर तिनको कुनै प्रयोजन र औचित्य स्थापित हुन सकिराखेको छैन ।
वास्तवमा अब त सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूका बारेमा बोल्नु, लेख्नुको पनि कुनै अर्थ छैन । उनीहरू तत्कालको स्वार्थ र लेनदेनमा यति विधि लम्पट छन् कि त्यसबाहेकका सबै कुरा उनीहरूलाई अनावश्यक मात्र होइन वाहियात नै लाग्छन् । नेपालको राजनीति बौद्धिक विमर्शबाट यति टाढा कहिल्यै थिएन । यस्ता गैरजिम्मेवार नेताहरूलाई सर्वप्रथम कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीहरू आफैंले नेतृत्वबाट पन्छाउन सक्नुपर्छ । तिनले सक्तैनन् भने जनताले पनि चुनावका बेला एकएक गरेर छानीछानी हराउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, यस्ता अनुत्तरदायी व्यवहार दोहोरिरहनेछन् र राजनीतिक एवं शासकीय बेथितिबाट नेपालको मुक्तिको सम्भवना पनि परपर धकेलिइरहनेछ । कान्तिपुर
एसपीपी अस्वीकार गरेकोमा चीनद्वारा नेपालको प्रशंसा
सरकारद्वारा एसपीपी अस्वीकार, परराष्ट्रमार्फत अमेरिकालाई पत्र पठाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनसक्ने माओवादी नेता महराको आशंका
एसपीपीको दूरगामी प्रभाव
मदन पौडेलको स्मृतिमा बटौली
एमसीसीपछि एसपीपी : चीनलाई घेरावन्दी गर्ने अमेरिकी निरन्तरता
वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनसहित सुन्दर बुटवल हेर्न आतुर बुटवलबासी
५ वैशाख २०६३, सहिद सेतु बिक : भ्रम र यथार्थ
निर्वाचन परिणामलाई परिपक्‍वतापूर्वक विश्लेषण गरौँ, कसैलाई लाञ्छना नलगाऔँ : कांग्रेस महामन्त्री शर्मा